Toerana 10 any Espaina handosirana ny ririnina mangatsiaka | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | Tanànan'ny Espana, España, General
Ao isika onja mangatsiaka feno, ary ny marina dia te hiverina hiverina amin'ny vanin-taona mafana isika, amin'izany hafanana izany ary amin'ny andro amoron-dranomasina. Any amin'ny faritra avaratra sy afovoany ary an-tendrombohitra no miha mangatsiaka kokoa izy ireo, ary azo antoka fa maro no efa mieritreritra ny hanao toerana malalaka handehanana any amin'ny toerana mafana kokoa. Izany no antony hanomezanay hevitra vitsivitsy anao.
Betsaka ny toerana itodihana izay manome hafanana bebe kokoa ho antsika tsy mila mandao an'i Espana. Ary izy io dia manana toerana tsara hitsidihana sy toerana an-tsehatra miaraka amin'ny toetr'andro isika amin'ireo daty ireo, hahafahana mandositra ny ririnina mangatsiaka. Mariho ireto toerana folo ireto izay akaiky dia akaiky, hahafahanao mankafy atmosfera mafana sy mieritreritra ny fahavaratra.
Tanàna mahafinaritra i Cádiz ka very. Izy io dia manana olona izay manampy antsika hahatsapa ho mahazo aina, ary faritra efa tranainy izay ahitanao fivarotana kely sy kianja afovoany ahafahanao misotro toaka amin'ny masoandro sy amin'ny masoandro. Na dia mazava aza fa ny toetrandro dia tsy toy ny fahavaratra ary mety tsy handro amin'ny ranon'ny malaza isika Morontsiraka CaletaEny, hitantsika ireo tontolo iainana rehetra ireo. Ary raha mpankafy fanatanjahantena amin'ny rano toy ny kitesurfing isika, dia eo amin'ny toerana mety indrindra.
Raha mandao ny saikinosy isika dia afaka mankany Ceuta, toerana iray izay mifangaro ny kolontsaina hafa ary misy zavatra betsaka atolotra antsika. Jereo ny rindrin'ny mpanjaka, izay mitondra antsika taloha, na mandehandeha mamaky ny valan-dranomasina Mediteraneana. Misy nosy kely koa eo akaiky eo, toa an'i Perejil na Santa Catalina. Azontsika atao ihany koa ny mandeha mitsangatsangana any Monte Hacho, ary ho akaiky dia akaiky an'i Maroc koa isika, raha sanatria te hitsoaka lavitra indray isika.
Melilla dia tanàna iray hafa miorina amin'ny kaontinanta afrikanina izay an'i Espana, ary ahafahantsika mankafy fotoana mahafinaritra mandritra ity vanim-potoana ity. Azontsika atao ny mamakivaky ny Hernandez Park, fa ny iray amin'ireo manintona azy lehibe indrindra dia ny mahita ny Trano mimanda taonjato faha-XNUMX. Izy io dia mbola manana telo amin'ireo fonosana efatra voafefy. Toerana hafa jerena ny Plaza de España na ny Tranombakoka Miaramila.
Any Alicante amin'izao fotoana izao dia mbola mangatsiaka ihany, marina izany, saingy tsy mangatsiaka toy ny any amin'ny tanàna sasany any afovoany na any avaratra, ka mety tsara raha fialantsasatra amin'ny faran'ny herinandro. Afaka miakatra amin'ny taloha isika Castle of Santa Barbara, izay ahitàna fahitana mahatalanjona, ary jereo ny nosy Tabarca, toerana iray izay tsy maintsy jerena ihany koa satria valan-javaboary voajanahary.
I Ibiza dia iray amin'ireo toerana mahaliana hitantsika mandritra ny ririnina. Tsy dia misy rivo-piainana eto amin'ity nosy ity toy ny fahavaratra, fa fomba milamina kokoa amin'ny fahitana azy. Tsy handeha ho eny amoron-dranomasina isika fa afaka mandeha mamaky mangina Dalt Vila ary azo antoka fa hianjera be ny vidiny amin'ny vanim-potoana ambany. Betsaka ny zoro, tanàna ary morontsiraka mangina hita fa tsy mila mandeha amin'ny fahavaratra, rehefa feno mpizahatany ny zava-drehetra.
Ao amin'ny Nosy Canary dia mahita lalan-drà hafa isika handosirana ny ririnina mangatsiaka. Ary amin'ity tranga ity dia afaka mandeha mankeny amoron-dranomasina mihitsy isika, satria ny mari-pana dia mety 25 degre amin'ireo nosy ireo. I Fuerteventura dia iray amin'izany, miaraka amin'ny fitsidihana tsy maintsy atao any tendrombohitra Mitsaya, na ilay morontsiraka Cofete malaza. Azonao atao ihany koa ny mitsidika ireo tanàna kely, toa an'i El Cotillo, na La Ampuyeta.
Lanzarote dia toeran-kafa iray izay mirona hipoka amin'ny fahavaratra, nefa mankafy ny toetrandro mandavantaona. Eto amin'ity nosy ity isika dia afaka mankafy ny torapasika fasika mainty, fa koa mitsidika toy ny Valan-javaboary Timanfaya, na ny Cueva de los Verdes, ilay tionelina noforonin'ny Volkano Corona.
Ao amin'ny nosy Tenerife dia manana tolotra tsara ihany koa izahay mandritra ny taona miaraka amin'ny toetr'andro mahafinaritra. Tsy ny hotely fisakafoanana ihany no hankafizintsika fa ny morontsiraka toa an'i Playa de Los Cristianos na La Tejita ihany koa. ny Fitsidihan'ny mpampianatra Tsy maintsy ilaina izany, miakatra ao anaty fiaran-tariby mba hanana fomba fijery mahavariana momba ilay nosy. Azontsika atao ihany koa ny mitsidika ny Loro Parque na ny Siam Park, zaridaina iray tena mahafinaritra.
Handeha atsimo amin'ny saikinosy isika izao, ary i Malaga dia mety ho toerana tsara mandritra ny ririnina. Ny toetr'andro mbola tsara mankafy ny Costa del Sol, fa raha tsy misy andro amoron-dranomasina dia manana zavatra hafa hatao isika, toy ny fahitana ny Alcazaba na ny Roman Theatre.
Tanàna atsimo iray hafa izay afaka manolotra zavatra mahaliana maro ho antsika. Ao Seville dia tsy hoe mahita faritra taloha tena mahaliana fotsiny isika, fa misy tsangambato maro hita, toy ny Giralda, ny Torre del Oro na ny Real Alcazar.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Toerana 10 any Espaina handosirana ny ririnina mangatsiaka
Miala tsiny fa hadinonao ny nanonona an'i Almería. Androany tamin'ny roa tolakandro dia 18 degre izany
Valiny tamin'i Maria del Mar
Gloria Rodriguez dia hoy izy:
Susana, tsy maintsy milaza aminao aho fa i Gran Canaria no nosy ekena fa manana ny toetr'andro tsara indrindra eto an-tany noho ny rivotry ny varotra izay mahatonga azy io hanana maripana lohataona mahafinaritra mandritra ny taona ary hanazava fa tsy any Tenerife i Playa del Inglés fa ao amin'ny Gran Canaria.
Valiny tamin'i Gloria Rodríguez
Ny marina dia mahamenatra, pejy fitsangatsanganana, ary tsy fantatr'izy ireo hoe aiza marina ireo morontsiraka. Raha vantany vao namaky azy io aho dia tena diso fanantenana satria nieritreritra fa mamaky lahatsoratra mahaliana. Playa del Inglés, iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny nosin'i Canary iray manontolo, dia ao amin'ny Nosy Gran Canaria fa tsy any Tenerife. Torohevitra iray: ny fampahalalana mifanohitra amin'izao dia tsy sarotra velively ary tena ilaina. Mirary ny soa indrindra
Ary inona no nolazainao tamiko momba ny moron-dranomasin'i Las Canteras?
Gran Canaria dia iray ihany ary tsy mitovy.
Mahafinaritra ny maripana eto amintsika.
Avia, atoroko azy.
Juan Reyes dia hoy izy:
Mahamenatra !!. Playa del Inglés dia any Gran Canaria. Ary any Fuerteventura dia tsy misy Mt. Voalaza fa Montaña de Tindaya ... Tsy dia lafo ny mianatra kely.
Valiny tamin'i Juan Reyes
Belinda dia hoy izy:
Norobain'izy ireo tamintsika Playa del Inglés… ..?
Valiny tamin'i Belinda
Raha miresaka toetrandro tsara ianao, ankoatra an'i Almeria ary tsy maintsy lazaintsika ny toetrandro Murcian. Ny mari-pana amin'ny mitataovovonana toy ny omaly dia mihoatra ny 18 °.
Clipper dia hoy izy:
Playa del Inglés dia tsy any Tenerife fa any Gran Canaria, mila mijery ireo toerana ianao
Mamaly an'i Clipper
Heveriko fa tsy fantatrao fa ny tena COSTA DEL SOL dia ALMERÍA izay misy hazavan'ny masoandro bebe kokoa isan-taona sy ny maripana marin-toerana indrindra mandritra ny taona. Manadino antsika foana izy. Mahamenatra izaitsizy tokoa ny tsy fahalalana.
Tsy haiko hoe aiza no nianaranao fa omeko 0 ianao no nanadino an'i ALMERÍA izay ananantsika ny mari-pana tsara indrindra manerana ny saikinosy na dia maharary ny maro aza ...
Susana tokony ho hainao tsara kokoa i Espana satria tsy lazaina intsony ny "Espaniôla atsimo atsinanana", satria leo ny antsoin'ny toetr'andro izahay, ALMERIA SY MURCIA no faritany ririnina manana mari-pana ambony indrindra ao amin'ny saikinosy ary misy masoandro miposaka mandritra ny ora maro. Manasa anao hivezivezy kely eto aho.
Ana isabel guadalupe sanabria dia hoy izy:
Handeha ny taona ary hitohy isika ho nosy tsara vintana, saingy hadino, tompokolahy, ny morontsiraka anglisy dia ao Gran Canaria, ary tsy ekeko ihany koa ny hevitra fa io no morontsiraka tsara indrindra ao amin'ny nosikely, ny nosy tsirairay dia manana hatsaran-tarehy sy ny morontsiraka mahafinaritra. Soraty aloha ny tenanao alohan'ny hanoratanao lahatsoratra. Misaotra
Valiny tamin'i Ana isabel guadalupe sanabria
Eny, tsy misy na inona na inona eo amin'ny farany adala izay mamoaka fa ny Playa del Ingles dia ao Tenerife dia tsy hino izany aho... Amin'ny fomba tsy misy olona 3 ihany no tsara toetrandro, izy rehetra, ka amin'ny taona manaraka dia apetraho ny Nosy Canary ihany ary azonao atao ny miditra ao amin'ny Teide amin'ny playa del ingles nefa toa tsy nahita fianarana ara-jeografika.
Susana Garcia dia hoy izy:
Eny, nanao hadisoana aho izay efa namboarina. Miala tsiny aho fa nanafintohina olona iray raha toa ka toy izany saingy tsia, tsy fantatro tsara ny teboka tsirairay ao Espana. Na izany na tsy izany Antonio, heveriko fa tsy ilaina ny manompa, satria olombelona daholo isika ary afaka manao fahadisoana, sa tsy izany?
Valiny tamin'i Susana Garcia